Wariyeyaashii Al Jazeera oo goor dhow xabsiga laga sii daayay – STAR FM SOMALIA
Wariyeyaashii Al Jazeera oo goor dhow xabsiga laga sii daayay
Waxaa goor dhow dib u helay xorriyadooda Wariye Xamza Maxamed iyo Labo sawir qaade ka tirsan Telefishinka Al-Jazeera qeybtiisa Afka English-ka ee xaruntiisu tahay magaalada Doxa ee dalka Qadar.
Sii deynta Wariyeyaashan oo muddo labo cisho ku xirnaa xabsi ay gacanta ku heyso NISA ayaa ka dambeeyay dadaalo ay u galeen sii deyntooda Mas’uuliyiinta Warbaahinta Soomaalida, diblomaasiyiin iyo Hey’ado caalami ah.
Wariyaha caanka ah Xamza Mohamed oo heysta Dhalashada Britain ayaa Galabnimadii Talaadadii laga qabtay duleedka magaalada Muqdisho, waxaa xilligaas bar koontarool ku qabtay Ciidamada Nabadsugida.
Xoghayaha Guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa xaqiijiyay in la sii daayay Wariyaha Al Jazeera Hamza Mohamed iyo labada sawir qaade ee la socotay la
Shalay ayay aheyd markii Xoghayaha Guud ee NUSOJ Macalimuu iyo Guddoomiyaha Dallada Warbaahinta Madaxa banaan ee SIMHA Xasan Cali Geesey ay ku booqdeen xarunta baarista Xisbiga oo Wariyaha iyo labada sawir qaade lagu hayay.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay xarigooda ayaa sheegay in iyagoo aan laga war qabin dalka soo galeen, isla markaana deegaanada Al-Shabaab ka taliyaan tageen, laguna soo dhoweeyay, wuxuu xusay in warbixin hal dhinac ah halkaas ka sii qaadeen sida uu yiri.
Ciidamada NISA ayaa todobaadkan xirtay Tifaftirihii Wargeyska Xog Ogaal Cabdi Aadan Guuleed, iyadoo xirtay xaruntii Wargeyska, inkastoo markii dambe la sii daayay.
Wariyeyaasha ka howl gala Soomaaliya ayaa la kulma dhibaatooyin isugu jira xarig, jirdil iyo hanjabaado, waxaana dhinacyada isaga soo horjeeda siyaasada Soomaaliya lagu eedeeyaa in aysan dhowrin xuquuqda suxufiga.
C/raxmaan Faroole oo ku guuleystay xubinimada Aqalka Sare ee Puntland